युगसम्बाद साप्ताहिक - कर्मकाण्डमा सीमित वी.पी. सिद्धान्त
कर्मकाण्डमा सीमित वी.पी. सिद्धान्त
“हरेक नेपालीको घरमा एउटा दुहुनो गाई होस्, उनीहरुका छोराछोरीले पढन पाउन्, औषधिमूलो सजिलै गर्न सकुन् ।” प्रजातन्त्रमा समाजवादको रसायन मिसाएर ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्नुपर्ने सपना देख्नुभएका बिपी कोइरालाको नेतृत्वको पार्टीले उहाँको नाम भजाउने बाहेक केही गरेन । तर, उहाँको स्मृति दिवस र जयन्तीका अवसरमा भने बिपी सिद्धान्तको चर्को व्याख्या गर्दछन् नेताहरु ।
यसै साता बिपी कोइरालाको १०४ औं जन्मजयन्ती मनाइयो । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले कोइरालाको राष्ट्रियता र समाजवाद सम्बन्धी चेतनाको भरपुर तारिफ गरे, व्याख्या गरे । तर, तिनीहरुकै कारण आज मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र एकता जोखिममा छ । संघीयता कार्यान्वयनको नाममा विभाजनको रेखा कोरिंदैछ । तराईलाई नेपालबाट अलग गर्ने देशी–विदेशी शक्तिको षड्यन्त्र कायमै हुन्छ । नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्व बिपी कोइरालाले आजभन्दा चार दशकअघि नै यसप्रति सचेत रहन निर्देशन दिनुभएको थियो । अहिले उहाँकै पार्टी यसको मतियार बनेको आरोप छ । बिपीको कथन थियो– “आज देशमा स्वार्थपरायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ । यस्तो परिस्थितिमा सबभन्दा पहिलो हत्या राष्ट्रियताको हुन्छ ।”
उहाँको अवशान भएको ३५ वर्ष भयो तर पनि उहाँ नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सधैं चर्चित रहनुभएको छ र उहाँका कालजयी विचारहरू अहिले पनि उत्तिकै मननीय र ग्रहणीय छन् । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद उहाँको वैचारिक राजनीतिक मूलधार हो । उहाँको नेतृत्वमा संस्थापन भएको नेपाली कांग्रेस पार्टीले बेलाबखत उहाँको नाम भजाएर राजनीतिक शाख राख्न खोजे पनि उहाँले स्थापित गरेको वैचारिक मूलधारबाट सो पार्टी धेरै विचलित भैसकेको छ । राष्ट्रियताका सवालमा बिपी कोइरालाले आफ्नो जीवनको अन्तिम कालतिर प्रवाह गरेका धारणाहरू नेपालको राष्ट्रियताको पक्षपोषण र सम्वद्र्धनका लागि मार्गदर्शक छन् ।
कोइरालाले २०३३ साल पुस १६ गते देशवासीका नाउँमा एक अपील जारी गर्दै राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आएको जिकिर गर्नुभएको थियो । उहाँको भनाइ थियो– “हाम्रो देशमा विदेशी तत्व कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेका छन् । राष्ट्रको रक्षा, देशको उन्नति, जनताको सुख र समृद्धिको पुनीत कार्यमा सबै एकमत भएर लागौं । यस राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद, अनुभव र मतभिन्नतालाई बिर्सेर र समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ । राष्ट्र रहेन भने हामी रहन्नौं भन्ने भावनाले प्रेरित हाम्रो कार्यक्रम हुनुपर्छ ।”
राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र वी.पी.को मूलमन्त्र थियो । बाह्य चलखेल र हस्तक्षेपको दुश्चक्रको पीडा बिपीको आफ्नै भोगाइ थियो । आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रवेश र चलखेलले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवैको हत्या हुने दृढ अभिमत बिपीको थियो भने बाह्य हस्तक्षेप र जातीय राजनीतिले मुलुकको हित नगर्ने प्रष्ट धारणा पुष्पलालको थियो । अहिले बिपीले अंगिकार गरेको वैचारिक धारबाट नेपालको वर्तमान राजनीति धेरै टाढा पुगिसकेको छ र नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकता नै अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको सर्वत्र अनुभूत भैरहेको छ । राजनीतिमा उहाँको उत्तराधिकार ग्रहण गर्ने र उहाँको वैचारिक धार र प्रभावको दोहन गरेर राजनीतिक सिँढी उक्लनेहरू नै अहिले परजीवी राजनीतिक गतिविधिका संवाहक बनेर प्रजातन्त्र र समाजवादको चीरहरण गर्न उपयोगमा आइरहेका छन् । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेको भए पनि दिशाहीनता र गन्तव्यहीनताको स्थिति विद्यमान नै छ । विधिको शासनको गोरेटो समेत अझै पहिलिएको छैन । नेताहरू बाटो बिराएको बटुवा समान छन् । बाह्य शक्तिका रणनीतिक गोटी बनेर प्रस्तुत हुने राजनीतिक नेतृत्वले स्वविवेक र आत्मनिर्णयको राजनीतिक मूल्य आत्मसात नै गर्न नसक्ने कटु यथार्थबोधले बिपीले अनुशीलन गरेको राष्ट्रवादी–स्वतन्त्रतावादी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक चिन्धातन धारको अरु महत्व दर्शाएको छ ।
यतिबेला राष्ट्रवादको कुरा गर्नु र राष्ट्रहितका मुद्दा उठाउनु ठूलै अपराध गरेको जस्तो हुने गरेको छ । महेन्द्र राष्ट्रवाद, अन्धो राष्ट्रवाद, वाहुनवादी राष्ट्रवाद भन्दै देशको हित चाहनेहरुको बिरुद्ध विदेशीको गुलामी गरेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न चाहनेहरुको बाहुल्य रहेको र सत्ताको मात्रै फन्को मार्नेहरुले बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको अपरिहार्यता बोधगर्दै निर्वासन त्याग गरी २०३३ साल पुष १६ गते स्वदेश फर्कदा जारी गरिएको अपीलको स्मरण गर्न किन नसकेको ?
पुनः एकपटक– “देशमा विदेशी तत्व कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेका छन् । आज देशमा स्वार्थपरायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ । यस्तो परिस्थितिमा सबभन्दा पहिलो हत्या राष्ट्रियताको हुन्छ ।” उहाँले सो अपीलमा भनेझैं अहिले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व नै जोखिममा पर्दैगएको अवस्था छ । वर्तमानका पथविचलित राजनीतिक गतिविधिले मुलुकलाई कस्तो दुर्नियतिको शिकार बनाउने हो भन्ने चिन्ता जताततै छ । नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रको प्रतिष्ठा अहिले जोखिममा परेको छ । राष्ट्रियतावाद, स्वतन्त्रतावाद र स्वाभिमानवादलाई बैदेशिक चलखेलमा मौलाएको आत्मसमर्पणवाद र उपयोगवादले खर्लप्पै निल्न लागेको छ । बिपीको नाम जप्नेहरुले राष्ट्रियताका सवालमा उहाँको मन्त्रहरु स्मरण गरेर पालना गरे देशको भलो हुने थियो र उनीहरु बिपीका सच्चा अनुयायी ठहरिने थिए ।